Maamulka Koonfurgalbeed ee dalka oo qorsheynaya inay weeraro ku qaadaan Shabaab – Radio Muqdisho
Maamulka Koonfurgalbeed ee dalka oo qorsheynaya inay weeraro ku qaadaan Shabaab
Wasiirka Warfaafinta Maamulka Koonfurgalbeed Soomaaliya ayaa sheegay in deegaanada fara-ku-tiriska oo ay kaga harsanyihiin maleeshiyaadka Al Shabaab gobalada Baay, Bakool iyo Shabeelada Hoose ay ka xoren doonaan, iyadoo shacabka ku nool deegaanadaasi uu ugu baaqay in ay dulqaatan inta laga xorenayo deeganadadooda.
Mudane Xasan Cabdi Maxamed Wasiirka Warfaafinta Maamulka Koofurgalbeed Soomaaliya oo lahadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in maalmaha dhaw ay howlgallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab ay ku qaadi doonaan deeganada ay dadka ku dhibaateynayaan, waxaana uu intaa ku daray in shacabka looga fadhiyo sidii ay dhankooda gacan uga geysan lahaayeen.
“18-ka degmo ee dowlad goboleedka Koonfur galbeed intooda badan waa xur, marka laga reebo Degmada Diinsoor dhawaan laga xoreyn doono haraadiga kooxda Shabaab, tan kale meelaha howdka ee ay shacabka ku dhibaateynayaan waan kaga dabo tegeynaa”ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Maamulka Koofurgalbeed.
Sidoo kale Mudane Xasan Cabdi Maxamed ayaa tilmaamay in maamulka uu qorsheynayo sidii loo dhameystiri lahaa hay’adaha weli dhiman ee qeybta ka ah maamulka.
Dhibaatada Qaadka oo laga hadlay “SAWIRRO”
Wasiir ku-xigeenka Xanaanada Xoolaha oo ka warbixiyay socdaal uu ku tegay Gedo